Dogecoin Slumps, Falls 23% satria mitsikera ny lisitra DOGE i Elon Musk | Avy amin'ny Linux
Dogecoin Slumps, Falls 23% satria mitsikera ny lisitra DOGE i Elon Musk
Isaac | | About us
El Dogecoin Mbola cryptocurrency iray hafa io, nalaina avy tamin'ny Litecoin ary mampiasa alika Shiba Inu ho biby fiompy. Raha ny marina, izany tandindona izany teraka ho meme viral amin'ny Internet, izay tsy hahatonga anao haka sary an-tsaina ny sanda mety ho tratran'ity cryptocurrency ity, hatramin'ny volana lasa teo dia hita ny fiakarany 1000% ny sandany, vokatry ny fandrindrana ny hetsika sasany, toy ny faneken'ny endri-tsoratra toa an'i Gene Simmons (tarika mozika Kiss), Elon Musk (Tesla / SpaceX), na ilay mpiangaly rap Snoop Dog.
Un fiovana vinavina izay nitondra tombony be ho an'ny mpandraharaha maro, fa koa fatiantoka sasany ho an'ny hafa. Noho ireo sanda ara-tantara ireo dia nanomboka tamin'ny vidiny 0.007 euro ny 4 Janoary 2021 ka hatramin'ny 0.073 Euros tamin'ny 7 Febroary. Midika izany fa tao anatin'ny iray volana mahery dia nanombanany ny fahatezerana mafy, izay mety ahazoana vola be handresena ireo izay nanambola raha toa ka ambany ny sandam-bola ary nivarotra raha mbola nijanona tamin'ny farany azony.
Saingy mazava ho azy, ny zavatra rehetra miakatra matetika dia milatsaka, ary ny Dogecoin (DOGE) dia nilentika 23% tao anatin'ny ora maromaro ny 15 febroary lasa teo. Noho izany, izay rehetra nipoitra tamin'ny vanim-potoana teo aloha, dia nandeha tany amin'ny fret taorian'izay Elon Musk dia hitodika amin'ny fizarana vola DOGE tena tsy mitovy ary hamporisika ireo tompon-trano hivarotra ny fananany.
Nisy ny tenin'ilay mpampianatra fiatraikany mahery. Fantatrao sahady fa ny zavatra madinidinika dia afaka manova be ny tsenan-tahiry, ary koa ny sandan'ny varotra amin'ireto cryptocurrency ireto. Saingy ny zavatra notakian'i Elon Musk dia marina, ary izany dia ny Dogecoin dia 28.7% eo am-pelatanan'ny olona tokana, ary ireo mpihazona 12 lehibe dia manana saika 50% amin'ny famatsiana ankehitriny. Saika ny 70% amin'ny fitambarany dia tombanana ho ao anatin'ny adiresy 100 mahery.
«Raha mivarotra ny ankamaroan'ny volany ny tompon-trano Dogecoin lehibe dia hanana ny fanohananako tanteraka izy ireo. Raha ny fahitako azy dia ny fifantohana be loatra no tena olana«. Voatanisa ny Musk.
Manodidina ny 7 ora aorian'io hafatra io, ny vidin'ny Dogecoin nilatsaka 23% izany, mandeha amin'ny $ 0.063 ka hatramin'ny $ 0.048.
Ankoatra izany, ny mpanorina ny tenany Vao haingana i Dogecoin no nanambara fa namidiny ny orinasa mitazona DOGE iray manontolo tamin'ny 2015 noho ny fahasahiranana ara-bola taorian'ny fahaverezan'ny asany.
Billy markus Nanambara izy fa nanomboka ny sangisangy tamin'ny Dogecoin tamin'ny 2013, noho io meme notanisiko io. Izy tenany koa dia gaga tamin'ny fiakaran'ny vidin'io vola io, izay tsy noheveriny akory fa hahatratra ireo soatoavina ireo. Tsy azony an-tsaina fa ny fiarahan-tsehatra nataon'i Elon Musk tamin'ny Dogecoin dia hitondra azy tahaka ny nataony, mainka fa ny fieritreretana fa io mpamily io ihany koa dia hiova ho lasa mpandefitra be indrindra ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Dogecoin Slumps, Falls 23% satria mitsikera ny lisitra DOGE i Elon Musk
GOS-P1: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Google - Fizarana 1
DVDStyler: fampiharana maimaimpoana sy multiplatform ho an'ny famoronana sy fanoratana DVD